Nbudata Chance Vought F4U-6 na 7 Corsair FSX & P3D - Rikoooo
Guy Hulin, Jean-Pierre Langer, Arne Bartels, Tim Conrad, FSX ntụgharị nke ala site na LLS
Akụkọ ifo Co American America Corsair F4U nọ ebe ahụ, ọ bụ otu n'ime ụgbọ elu ndị agha ama ama nke agha ụwa nke abụọ, ekele ya na silhouette na nku ya na W (Gull inverted) nke na-eme ka Corsair bụrụ ihe a na-amata ngwa ngwa. A gbanwere ụdị 3D nke zuru oke ka ụmụ amaala si FS2004 gaa FSX / P3D site na LLS. Gụnyere ihe ndozi 7, ụda omenala, ihe ngosi zuru oke, eserese dịpụrụ adịpụ n'èzí, akpịrị ịkpọ oku, panel 2D, akwụkwọ.
<L> N'ihi na àmụmà.
<Mgbanwe-E> To meghee ma mechie ụzọ.
<I> N'ihi na usoro nke anwụrụ ọkụ.
<Ctrl-ịgbanwee-V> Ka mepee Cowls Flaps
<Ctrl-ịgbanwee-C> To emechi Cowls Flaps
<Mgbanwe-T> N'ihi na Tailhook
Onye edemede: Guy Hulin, Jean-Pierre Langer, Arne Bartels, Tim Conrad, FSX ntụgharị nke ala site na LLS